Isbeddellada Ka Socda Warshadaha Xashiishadda ee Kordhi Kara Maalgashiga 6-da illaa 12 Bilaha Soo Socda • Daroogooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Isbeddellada ka socda warshadaha xashiishka ee kobcin kara maalgashiga 6 illaa 12 bilood ee soo socda
Saamiyada & DhaqaalahacannabisSharci dejinta & Sharci dejinta
Isbeddellada ka socda warshadaha xashiishka ee kobcin kara maalgashiga 6 illaa 12 bilood ee soo socda
albaabka Ties Inc. February 7 2021
maqaal by Ties Inc. February 7 2021
Waxaa jira horumarro badan oo dhowaanahan oo saameyn togan ku leh suuqa xashiishka. Sharciyeynta baaxadda weyn iyo sharciyeynta Ameerika waxay ku abuureysaa rajo suuqa.
Bayaan ay toddobaadkan sii daayeen Hoggaamiyaha Senate-ka Mareykanka Chuck Schumer iyo laba senator kale oo Dimuqraadi ah ayaa riixaya mowjado kale oo cagaaran Waxay rabaan inay ka shaqeeyaan sharciyeynta federaalka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Isbeddelkani "wuxuu siinayaa maalgashadayaasha dareen ah in lacag badan oo hay'adeed ay dhowaan soo geli doonaan warshadaha," Tim Seymour, oo ah aasaasaha iyo madaxa sarkaalka maalgashiga ee Seymour Asset Management, ayaa usheegay CNBC "ETF Edge" toddobaadkan. Taasi waa war weyn oo loogu talagalay shirkadaha xashiishka ee ka shaqeeya gobollada leh xoogaa sharciyeyn ah. Waxaa xusid mudan, Curaleaf, Warshadaha Green Thumb, TerrAscend iyo Cresco Labs, ayuu yiri Seymour, oo maamula Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Waxa kale oo ay ka faa'iideysataa shirkadda Canadianka ee weyn ee Canano Growth.
Horumarka suuqa xashiishadda
New York sidoo kale waxay kicin kartaa suuq weyn. Gudoomiyaha Andrew Cuomo wuxuu riixayaa sharciyeynta ku saabsan u wareejinta New Jersey ee isticmaalka madadaalada, ayuu yiri Seymour. "New York waa nooc muhiim u ah 'qaangaarnimada' guud ahaan Xeebta Bari," ayuu yiri. U oggolaanshaha maalgashadayaasha Mareykanka inay si toos ah wax uga sheegaan is-weydaarsiga saamiyada gudaha waxay noqon doontaa tallaabo weyn oo horay loo qaaday. Taasi waxay wadada u xaareysaa mid balaaran maalgelin iyo bandhigyo badan oo dadweynaha ah. ”
Lixda bilood ee soo socota, waxaa la rajeynayaa in raasamaal badan ay soo gasho waaxda, maadaama hadda ay maalgashi ku sameyn karaan ciyaartoy hay'adeed. Bangiyadu waxay gacan ka geysan doonaan sidii loo keeni lahaa raasumaal badan waaxda, ”ayuu yiri Seymour. Isugeyn badan, helitaanno iyo xoojin ayaa sidoo kale suuragal ah inay dhacaan lixda bilood ee soo socota. Kalandarka heshiiska xashiishka ayaa u muuqda mid aad u xiiso badan saddexda ilaa lixda bilood ee soo socota, ayuu yidhi. Arbacadii, Jazz Pharmaceuticals waxay ku dhawaaqeen heshiis $ 7,2 bilyan ah oo lagu iibsanayo dawooyinka GW ee daaweynta suuxdinta ee ku saleysan xashiishadda.
Waxay u egtahay inay tahay mid ka mid ah heshiisyada istiraatiijiyadeed ee badan ee maalgashadayaashu ku arki doonaan booska sanadkan, sida laga soo xigtay Seymour.
Akhri wax dheeraad ah cnbc.com (Source, EN)
Americamaalgelintacannabiskaydka xashiishkamaaliyad ahaan
Beckham wuxuu taageeraa shirkad iibisa alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed oo ay ku jiraan xeryahooda xashiishka
Ma marijuana ma ka fiican tahay kaniiniyada hurdada hurdo la'aan? 5 shay oo ay tahay inaad ogaato.
Daraasad: Alaabooyinka xashiishadda ayaa muujinaya hoos u dhaca xanuunka daba-dheeraada
Cilmi-baaris cusub ayaa muujisay in Generation Z uu yahay ...
Xashiishada ma ka caawisaa ADHD?
Xashiishadda cannabis saamayn ma ku leedahay riyadaada?
Kala duwanaanshaha hemp-ka hodanka ah ee CBG ugu horreeyay ayaa loo oggolaaday buug-gacmeedka dhirta EU